Tag: fariin gaar ah | Martech Zone
Tag: fariin gaar ah
Ku saabsan cayda ugu xun ee suurtogalka ah ee aad ka heli karto internetka waa in lagugu eedeeyaa inaad tahay spammer. Weerar kasta oo kale oo loo geysto dabeecadaada ma lahan awood joogitaan oo isku mid ah. Mar alla markii qof u maleeyo inaad tahay spammer, waligaa dib uguma noqon doontid dhankiisa wanaagsan. Wadada loo maro spamville waa hal wado oo keliya. Kaaga sii darane, waa wax la yaab leh oo sahlan in la qaado talaabooyin ku saabsan noqoshada spammer iyada oo aan xitaa la ogaan! Waa kuwan shanta ugu sarreysa